Ngaba unyana wam udlala ngonodoli | Oomama Namhlanje
Kutheni unyana wam edlala ngonodoli
UAlicia tomero | 17/06/2021 10:00 | ekufundeni, Iingcebiso, Phuhliso, Intsapho
Ukuba umntwana wakho udlala ngoonodoli inokuba yinxalenye yemeko yendalo, inxulumene naloo ndawo yobudoda yokwenza izinto zakhe ezincinci ukuze kwixesha elizayo akwazi ube ngumzali kwaye ube yinxalenye yosapho.
Vumela abantwana badlale ngonodoli ayiphelelanga ekubeni inento eninzi yokwenza noluntu lwethu, njengoko iqhubeka iphuma ngaphandle kwesiqhelo. Isenzo sokudlala ngeethoyi ezinje ngoonodoli asiyisebenzisi indawo yakhe yobudoda, kodwa endaweni yoko iba luncedo kuphuhliso lwakhe.
1 Kutheni umntwana wam edlala ngonodoli?
2 Iidoli kunye nokunxibelelana kwazo nabantwana
3 Eyona nto iphambili kukuthandana nentlonipho
Kutheni umntwana wam edlala ngonodoli?
Besihleli sichaza iithoyi okanye sizihlela "ngeethoyi zamakhwenkwe" kunye "neethoyi zamantombazana" kukuzimisela okungachazwanga kakuhle. Indawo esingqongileyo yethu sele ithathela ingqalelo indima yokuba ngutata ukwenza eminye imisebenzi engahambelani naleyo yabasetyhini.
Intengiso ibisoloko yenza oku kwahlulwa kunye nokwahlulwa ngokwesini, Apho kwenziwa khona ibhombu rhoqo ukudala iimeko ezingekho sikweni. Kancinci kancinci kukho iinkampani zokudlala ezibeka amaphulo abo esiqhelo kwaye zinika abantwana ithuba lokudlala ngoonodoli nayo yonke into enxulumene noko, ukuze funda ukuba ngabantu abadala abangcono ngokudlala.
Ukudlala komntwana wakho ngoonodoli ziindaba ezimnandi, kuba bazenzele ezabo iingcinga zehlabathi, ukwenza indlela yokuziphatha yabo eya kuba njalo kunye nendlela abanokunxibelelana ngayo. Abantwana banakho uku Sebenzisa intelekelelo yakho kwaye uyijike nayiphi na into kwaye uninzi lwazo lusebenzisa oonodoli kuvavanyo lwezakhono zentlalo ezigcinwe likamva, ezinje ukusonjululwa kwembambano, intsebenziswano nentsebenziswano.
Iidoli kunye nokunxibelelana kwazo nabantwana
Namhlanje zikhona emarikeni iintlobo ngeentlobo zabalinganiswa abamele iindima kunye nobugcisa (ijaji, impilo, abadlali bebhola ekhatywayo, oogqirha, ootitshala ...) ziithoyi ezinceda abantwana ukuba babone oonodoli babo kwaye bacinge ngeendlela ezahlukeneyo ezingapheliyo. Ke ngoko, umntwana sele enikwa ithuba lokufunda ngokudlala nangonodoli. njengolunye uguquko lokufunda.
Umdlalo ngonodoli ivelisa izakhono zokuqonda, idale ukukhula kwengqondo kunye nokukhula kweemvakalelo. Umntwana odlala ngoonodoli uyavezwa ukuba uyazi njani ujongise kwaye ukrole imisebenzi yakho yasekhaya kwilixa elizayo. Uya kuziqhelanisa nezakhono zemihla ngemihla ngento yakho yokudlala njengokuhlamba, ukondla, ukuhamba nokuyinxiba.
Abazali kubukho obunjalo ekufundeni kwabo ukudlala okanye ukonwaba akukho mfuneko yokuba babeke isini sabantwana babo. Maninzi amakhwenkwe adlala ngeethoyi ezinxulumene namantombazana, kunye namantombazana adlala ngeemoto neebhola. Emva koko bakhula besiva isini abakuso.
Eyona nto iphambili kukuthandana nentlonipho
Ukuba kamva umntwana odlala lo mdlalo ubonakalisa indlela aziphatha ngayo ngokwesini, akufuneki ujongane nengxaki yokwenyani. Kuyaziwa ukuba namhlanje baninzi abazali aboyikayo nabadidekileyo abanesini. Kukho ucalucalulo kunye noxinzelelo lwentlalo isekhona kwinkcubeko yethu kwaye ngenxa yoko sihlala sisala ukuvumela "unyana wethu adlale ngonodoli".
Kunzima ukucacisa ukusuka apha esinokuba sesona sigqibo sihle. Ukuba imiqondiso icacile, into ekufuneka siyithathele ingqalelo yile uthando nentlonipho, yinyani yokwenyani, kodwa kunzima ukuyila. Ngalo naluphi na uphawu xa uqaphela ukuba umntwana wakho uyakuthanda ukudlala ngoonodoli ungaze uhlekise okanye wenze intetho njenge "nenaza".
Umntwana othanda ukudlala ngokukhululekileyo kwaye nabazali abayicinezelayo bayayenza yiba neentloni ngento oyenzayo kwaye uzive udeliwe. Ukuba sineentloni ukubona abantwana bethu benje, sinyusa kuphela "bazothini" kolu luntu. Eyona nto ichanekileyo kukushiya khulisa umntwana wakho ngothando nentlonipho ukuze ufunde ukuzithanda nokuzihlonela.
Abantwana bethu zezona zixhobo zixabisekileyo, kufuneka sibathande kuba bangabethu, kwaye abazali abaninzi benza izigqibo ezingqwabalala kwaye baphulukana nazo ziintlanganiso ezinyulu zentlalo. Njengengcebiso elungileyo, kufanele ukuba ingene kwindawo yethu njengabazali, inike umbulelo kunye nokudumisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Intsapho » Kutheni unyana wam edlala ngonodoli
Amawele am akakhuli
Kutheni umntwana wam ephefumla ngokukhawuleza